သရဲတောင် ငိုရတဲ့ “မိန်းမ” – Let Pan Daily
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ ကထူးဆန်းမှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ အလွန်ချစ်ကြတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိပါသတဲ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မျက်စိအောက်ကအပျောက်မခံနိုင်လောက်အောင်ချစ်ကြ ပါသတဲ့။
အဲ့ဒီတိုင်းပြည်က လင်မယားတွေရဲ့စံပြစုံတွဲပါပဲတဲ့။ တစ်နေ့တော့ယောင်္ကျားဖြစ်သူဟာ ရုတ်တရက်ဆုံးသွားပါတယ်။ မိန်းမဖြစ်သူဟာကိုယ်ကို ကိုယ်သတ်သေပြီးယောင်္ကျားနောက်လိုက်မယ် လုပ်နေလို့အစောင့်အရှောက်တွေနဲ့ထားရပါသတဲ့။
ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း အလွန်က်ိုသနားနေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ မိန်းမရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းယောင်္ကျားအလောင်း ကိုမပုပ်သိုးအောင်လုပ်ပြီးအခေါင်းထဲထည့်သင်္ချိုင်းမှာအိမ်တစ်လုံးဆောက်ပြီး..မိန်းမနဲ့အတူထားခဲ့ပါတယ်တဲ့။
မိန်းမဖြစ်သူဟာ အစေခံ၂ယောက် နဲ့အတူယောင်္ကျားအလောင်းကြီးနဲ့သင်္ချိုင်းမှာပဲနေပါသတဲ့။မိန်းမဖြစ်သူဟာယောင်္ကျားအပေါ်ချစ်တတ်လွန်းသူကြီးဆိုပြီးနာမည်ကောင်းတွေရနေပါသတဲ့။လာကြည့်တဲ့သူတွေလည့်းနေ့စဉ်မပြတ်ပါဘူးတဲ့။
တစ်နေ့တော့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ နတ်ဘုရားကျောင်းက ရတနာတွေကိုဝင်ရောက်ဖောက်ထွင်းခိုးယူတဲ့ သူခိုး ၅ ယောက်ကိုဖမ်းမိပါသတဲ့။ဘုရင်ကမှတ်လောက်သားလောက်ဖြစ်အောင်ကားစင်မှာစို့ရိုက်သေဒါဏ်ပေးပြီးမြေမမြုပ်ဘဲထားပါသတဲ့။
နောက်လူတွေမလုပ်ရဲအောင်သင်္ချိင်းထဲမှာ အလောင်းတွေကိုပြထားပါသတဲ့။အလောင်းတွေ အပျောက်အချမရှိအောင်စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်ကိုအစောင့်ထားခဲ့ပါသတဲ့။အလောင်းတွေမပျောက်စေရ။ပျောက်လျှင်သေဒဏ်လို့အမိန့်တော်ထားခဲ့ပါသတဲ့။
ညဘက်ရောက်တော့စစ်ဗိုလ်ဟာအလောင်းတွေ လိုက်စစ်ရင်းသင်္ချိုင်းထဲကမိန်းမနေနေတဲ့ အိမ်နားရောက် သွားပါသတဲ့။.အဲ့ဒီအချိန်မှာမိန်းမဖြစ်သူဟာသူ့ယောင်္ကျားအခေါင်းဘေးမှာရပ်ပြီးငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါသတဲ့။
အဘယ်မျှချစ်ကြောင်း ၊သတိရကြောင်းပြောပြောပြီးငိုနေပါတဲ့။မိန်းမဖြစ်တဲ့သူကိုစွဲလမ်းစိတ်နဲ့သေခဲ့တဲ့ယောင်္ကျား ဟာလည်းသူ့မိန်းမဘေးမှာပဲ..သရဲကြီးဖြစ်နေပါသတဲ့။
သရဲကြီးဟာမိန်းမဘေးမှာပဲ တစ်ဖဝါးမှမခွာစောင့်ရှောက်နေပါသတဲ့။ ဒိလိုဖြစ်နေတာကို မိန်းမကသိပါသတဲ့။ညဆိုရင်အတူတူတောင်အိပ်ကြပါသတဲ့စစ်ဗိုလ်ဟာငိုနေတဲ့မိန်းမကိုမြင်မြင်ချင်းစွဲလမ်းသွားပါသတဲ့။
သူ့မှာတော့..မိန်းမသေတာတောင်.စစ်တာ ဝန်ထမ်းဆောင်နေရလို့မရောက်ခဲ့ရပုံ၊ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပုံတွေကိုဖွဲ့နွဲ့ထားတာဖြစ်ပါသတဲ့။စစ်ဗိုလ်ဟာညတိုင်းညတိုင်းမိန်းမအိမ်နားလာပြီးသီချင်းဆိုပါသတဲ့။၅ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့မ်ိန်းမဖြစ်သူဟာ သူ့အစေခံကို လွှတ်ပြီးစစ်ဗိုလ်ကိုခေါ်ခိုင်းပါသတဲ့။
အိမ်ထဲရောက်တော့ရှင့်မိန်းမကိုအတော်ချစ်တာပဲလားလို့မေးပါသတဲ့။စစ်ဗိုလ်ကဘယ်နဲ့မေးပါလိမ့်ဗျာကျုပ်မိန်းမကို ကျုပ်သိပ်ချစ်တာပေါ့မနက်ခင်းဆို..သူ့နဖူးလေးမွှေးပြီး ကျုပ်န်ိုးတယ်။ သူမျက်နှာသစ်တုန်း သနပ်ခါးလေးသွေးထားတယ်သူ့ဆံပင်လေးတွေကိုဆီလူးပြီးပြုပြင်ပေးတယ်။ဘုရားကိုအတူတူရှိခိုးတယ်။ထမင်းစားလဲအတူတူစားတယ်။ခွံကြွေးကြတယ်။
သူရေချိုးဖို့ ခပ်ပေးတယ်။တစ်ယောက် တစ်လှ့ည်ချေးတိုက်ပေးတယ်။ညအိပ်ရာဝင်ကာနီးရင်သူ့ဆံပင်တွေကိုပြန်ပြုပြင်ပေးတယ်။ဒီအချိန်ဆိုကျနော်တို့ ၂ယောက်သိပ်ပျော်တဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာ။
အိပ်ရာထဲမှာ..အဝှါ..လုပ်ကြတဲ့အချိန်ပေါ့ဘာအဝှါလုပ်ကြတာလဲရှင့်ဟာ..ပြောလို့မဖြစ်ပါဘူး.—ပြောပါရှင် အိပ်ယာထဲမှာအဝှါလုပ်တယ်ဆိုတာက စကားထာဝှက်တာကိုပြောတာပါ။ဥပမာ..သူကကျွန်းတုံန်းကြောင်လျှောက်..လို့ပြောရင်ကျနော်ကလွမ်းတုန်းမောင်ရောက်လို့ဖြေရတာလေ။
မှတ်မှတ်ရရ. ကျနော်သူ ကိုမေးဘူးတယ်။စာကန်းမလေးတစ်ကောင်အစာကောက်နေတုန်းအထက်ကစာတစ်အုပ်ဖြတ်ပျံ့သွားတော့စာကန်းမလေးကအထကျကညံညံစာတစ်တစ်ရာသံထင့်လေးလို့မေးလိုက်တယ်။အထက်ကစာတွေကဒို့တူ၊ဒို့စိတ်၊ဒို့ဝက်..ညည်းကောမှစာ၁ရာလို့ပြန်ဖြေတယ်။အထက်ကပြန်သွားတာစာဘယ်နှစ်ကောင်လဲလို့မေးလိုက်တယ်။
သူအဖြေမရမချင်းစဉ်းစားတယ်သူအဖြေကိုရခဲ့ပါတယ်။ အဖြေရလို့ပျော်နေတဲ့သူ့မျက်နှာလေးကိုအခုထိမြင်ယောင်နေဆဲပါဗျာ။ရှင် အတော်ကိုချစ်တတ်တာပဲနော်ဘယ်နဲ့ပြောပါလိမ့်.ချစ်တတ်တာပေါ့ဗျာ။သူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေတုန်းအစေခံမလေးနှစ်ယောက်ကအိပ်သွားပါပြီ။သူတို့အနားမှာလူမသိသူမသိသရဲကြီးတစ်ကောင်ပဲရှိပါတော့တယ်။
မိန်းမကသူ့လက်ညှိုးထိပ်ကလေးကိုပါးစပ်နဲ့မထိတထိကိုက်ရင်းစစ်ဗိုလ်ကို မျက်လုံးလေးထောင့်ကပ်ပြီးရှင့်မိန်းမကို ဂရုစိုက်သလိုကျမကိုဂရုမစိုက်နိုင်ဘူးလား လို့မပွင့်တစ်ပွင့်လေးမေးလိုက်ပါသတဲ့။ ကိုယ်ရံတော်သရဲကြီးလန့်သွားတယ်။သဘောမတူကြောင်းပြတဲ့အနေနဲ့မီးတွေငြိမ်းပစ်တယ်။
စစ်ဗိုလ်ကမီးတွေပြန်ထွန်းမယ်လုပ်တော့ မိန်းမက..မထွန်းနဲ့တော့တဲ့ မဖီးမသင်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ .ကျမဆံပင်လေးတွေကိုရှင်းပေးပါလားတဲ့ကျမပါးလေးကိုသနပ်ခါးလေးလူးပေးပါလားတဲ့အိပ်မပျော်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကျမကို.နဖူးလေးအသာနမ်းပြီးချော့သိပ်ပါလားတဲ့။
သရဲကြီးသည်းမခံနိုင်တော့ပါဘူး။ဒေါသကြီးစွာနဲ့ တခါးတွေကိုတဝုန်းဝုန်းဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက် လုပ်တယ်။လေတွေတဝေါဝေါတိုက်တယ်။ အသံတွေပေးတယ်။တစ်အိမ်လုံးဗြောင်းဆန်နေအောင်ကြောက်မက်ဖွယ် ချိမ်းခြောက်တယ်။သရဲကြီးမှားသွားပြီ။ မိန်းမကကြောက်ဟန်ဆောင်ပြီးစစ်ဗိုလ် ကိုအတင်းဝင်ဖက်တယ်။ပြီးတော့ကုတင်ပေါ်တွန်းလှဲလိုက်တယ်။သူကတော့စစ်သားလေ၊သရဲလောက်တော့စာမဖွဲ့။
အိမ်ထဲကအသံတွေကသူ့အသဲကိုဓားနဲ့မွှန်းနေတာထက်ခံ ရဆိုးတယ်။ရင်ကွဲမတတ် အသံဆိုးကြီးနဲ့အော်တယ်။ အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ခဲတွေပစ်ချတယ်။ အစေခံနှစ်ယောက်ကြောက်လွန်းလို့အပြင်မထွက်ရဲ။ သရဲကြီးကိုယ်တိုင်ဟိုနှစ်ယောက်အတွက်အခွင့်အရေးတွေဖန်တီးပေးနေသလိုလိုဖြစ်နေတာကိုသရဲကြီးစဉ်းစားမိပြီ။သရဲကြီးစဉ်းစားပြီ။လက်ကနဲအကြံတစ်ခုရပြီ။ဘုရင်ကအမိန့်တော်မှတ်ထားတာသူခိုးတစ်ယောက်အလောင်းပျောက်ရင်သေဒဏ်တဲ့။
တွေ့ပြီပေါ့ကွာငါ့မိန်းမနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ငနဲသေဖို့သာပြင်။ ကားစင်တင်ထားတဲ့သူခိုးတစ်ယောက်အလောင်း ကိုအစဖျောက်ရမယ်။လက်စလက်နမကျန်အောင်ဘာလုပ်မလဲ။ စားပစ်ရမယ်။ဝါရင့်သရဲမဟုတ်တော့စားရတာမလွယ်။ တစ်ညလုံးကြိုးစားပမ်းစား..စားလိုက်မှသရဲဗိုက်ကြီးသည်ဖြစ်မှတစ်လောင်းကုန်ရုံလေး။
မနက်လင်းတော့ပြသနာတက်ပြီ။တစ်ရေးမှမအိပ်ရသေးတဲ့ စစ်ဗိုလ်အိမ်ထဲကထွက်ပြီး အလောင်းတွေလိုက်စစ်တယ်။ တစ်လောင်းပျောက်နေတာတွေ့ပြီ။ကြောက်အား လန့်အားနဲ့အိမ်ထဲပြန်ဝင်ပြေးတယ်။သရဲကြီးသိပ်ကို ဝမ်းသာသွားတယ်။မင်း..ဘာတတ်နိုင်သေးလဲသူ့ ဗိုက်ပူပူကြီးမနိုင့်တနိုင်သယ်ရင်းအိမ်ထဲလိုက်သွားတယ်။
ကားစင်မှာတင်သံပြန်စွဲထားလိုက်ပေါ့လွယ်လွယ်လေးပါမောင် တဲ့သရဲကြီးပါးစပ်အဟောင်းသားအံ့သြချက် ကမ်းကုန်ချစ်လှပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့သူမခုတော့ စစ်ဗိုလ်ကသရဲကြီးအလောင်းကြီးကိုထုတ်ပြီးကား စင်မှာပြန်တင်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့အ်ိမ်ထဲပြန်ဝင် သွားပြီးမိန်းမဘေးမှာပြန်အိပ်နေလိုက်တယ်။
မိန်းမကစစ်ဗိုလ်ရင်ခွင်ထဲပြန်တိုးဝင်လိုက်တယ်။သရဲကြီး ဘာမှမတတ်နိုင်တော့။ရှိက်ကြီးတငင် သာအော်ဟစ်ငိုရိုလိုက်ပါတော့တယ်။ သူအချစ်ကြီးချစ်တဲ့မိန်းမကြောင့်သရဲကြီး ငိုနေရပါပြီ။နောက်တစ်နေ့မှာတော့မိန်းမရဲ့အိပ်ရာထဲမှာရင်ဘတ်ဟောင်းလောင်းပွင့်ပြီးသေနေတဲ့ပုတ်သင်ကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။သရဲတွေသေရင်ပုတ်သင်တို့ကင်းလိပ်ချောတို့အဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားသတဲ့။ဒါဆိုသရဲကြီးရင်ကွဲနာကျပြီးသေတာပေါ့နော်
ဒီပုံပြင်လေးကမိန်းကလေးတွေ..ယောင်္ကျား မာယာကို သတိထားဖို့ယောင်္ကျားမိန်းမမည်သူမဆိုသရဲကြီးလိုအစွဲအလန်းမကြီးဖို့အရာရာဟာပုံသေတွက်ဆလို့မရဘူးဆိုတာအချိန်ရဲ့တိုက်စားမှုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လှည့်စားမှုအောက်မှာအရာရာဟာပြောင်းလည်းတတ်တယ်ဆိုတာ ဆင်ခြင်နိုင်ကြ ပါစေ …
(၇) ရကျ သားသမီး မြား အတှကျ တဈပတျ စာဟော စာတမျး
ပရဟိတ ကာခြုပျကွီး ဦးကြျောသူ ကိုဗဈကူးတာ ခံလိုကျရပွီ
ဒီဇငျဘာလ ( ၁ )လစာ ဟော စာတမျး တငျပေး လိုကျပါပွီ…. (ရှယျထားပေးပါအုံး …)
နောက် (၂) ရက်အတွင်း မိုးပိုလာမည့် ဒေသများ မိုးဇလ ထုတ်ပြန်